Oge Ọgụgụ: 5 nkeji
(Emelitere ikpeazụ On: 09/07/2021)
15 nke 17 ọdọ mmiri na-emeghe nile n'afọ na otu onye nke nnukwu ime ụlọ ọdọ mmiri na jikọọ na a kpụ ọkụ n'ọnụ n'èzí ọdọ mmiri nwekwara oghe ofụri isua. Mmiri a na-efegharị efegharị na ọdọ mmiri kpoo ikuku nke seaside ememe. The surf ọdọ mmiri bụ oke! Ọ ga-eji pụrụ iche mbadamba mepụtara maka ime ụlọ were nakwa na gị onwe gị board.
Ọ bụrụ na ị na-achọ imega e a 25 m (82 ft) egwu mmiri na a 3 m (10 ft) mmiri elu. The ime ụlọ njem ọdọ mmiri ahụ na-enye 11 slides na a ngụkọta ogologo nke fọrọ nke nta 1 km (0,6 kilomita). The kasị elu slide na-ewe gị ala na a na-akpali akpali na-agba ịnyịnya si 17 m (55 ft). Ọzọkwa, e nwere a dum slide maka elu atọ ndị mmadụ nade nakwa dị ka ihe yabasị slide na a 180 m (590 ft) ogologo ugwu osimiri, nwegasịrị na nkpoda nkume, ma ọ bụrụ na ị na-enwe mmetụta adventurous.
Njikere abịa gị uwe eji egwu mmiri na-aga na a na-eme njem chọta The Best Water Parks na Europe? Heck ee! Ozi kacha mma, ị nwere ike nweta ihe a nile ebe mfe na enyemaka nke SaveATrain ! Na-enweghị zoro ezo mmezi ụgwọ, ị ga-enwe ihe na-emefu na egwu agafe na ezi ugboro! AKWỤKWỌ na Summer ezumike, ugbu a!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-water-parks-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#summertrip #summerwaterpark #waterparks europetravel ezinụlọ summerholidays
10 Kasị Beautiful Okporo ámá Na Europe
Njem ụgbọ oloko, Ingbọ oloko na Belgium, Train Travel Denmark, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Train Travel Scotland, Ingbọ ologo Spain, Train Travel UK, Travel Europe
Best European Train ụzọ gasị
Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Train Travel Norway, Train Travel Switzerland, Travel Europe